Klout Zvikoro Zvakagadzirwazve ... uye ndinozvida! | Martech Zone
Ndakanga ndanzwa nezvazvo Klout nguva yadarika asi handina kunyatsoteerera kusvikira ndasangana nechikwata cheKlout muLas Vegas. Ndakaiyedza ndikaona kuti zvimwe zvezvibodzwa zvaishayikwa. Semuenzaniso, vazhinji vedu taive nemapeji akawandisa, maakaundi akawanda, uye nhoroondo pamhepo yakatora makore gumi… asi Klout haina kukanganiswa nezvose izvi.
Nguva yekupedzisira Klout paakavandudza iwo mamakisi, ivo vakandirasa zvachose. Zvibodzwa zvakatungamirwa zvakananga nezviitiko zvenguva ichangopfuura… kunyangwe kupfuura zvazvaive kare. Kuwanda kwangu kwepasi kwakadzika kwanga kusiri kundidzidzisa chero chinhu nezve kudyidzana munharaunda. Saka ndakamira kutarisa.
Klout ndichangopedza hukuru hwekuvandudza mamaki uye ndanga ndichitamba nawo kubva pavakatanga. Ndatarisa kumusoro vanokurudzira, ndanga ndichiongorora netiweki yangu, uye ndanga ndichishandisa iyo Klout nharembozha app zuva nezuva (inenge iri muropa… chiwane). Chimwe chinhu chinotonhorera cheiyo nharembozha ndeyekuti iwe unogona kuitisa kuti iratidze mamaki ako senhamba yekuzivisa pane iyo pachayo. Iwe hautombofaniri kuvhura iyo app kuti uone mamaki ako futi!
Chimwe chezvinhu zvandinofarira ndizvo zvinoitika kana ini ndikabaya pane imwe nhoroondo. Rine simba peji rinogadzira yakanaka graphic inoratidza kwandinofanira kunge ndichibatana neanokurudzira, pane misoro yenyaya, uye nekuona kuti ndevapi vatungamiriri vatinofanana. Izvi zvinonakidza kune chero mushambadzi…. kugona kutsvaga nemusoro wenyaya kana kukurudzira, uye kunzwisisa kuti kupi uye sei kubatana kune iye anokurudzira ibhenefiti yakakura yekuwedzera kusvika kwako.
Ndingadai ndichiri kuda kuona Klout ichipa mamwe matipi mune yavo grid yemitambo yeKlout. Kunyange ndichifarira kunzi Mutungamiriri Anofunga, ndingafarire kuona mamwe matipi kana maitiro akanakisa ekundibatsira kuti ndive nepakati pamaitiro angu mukushandisa masocial network… pamwezve kugovana uye kutora chikamu. Ini handidi kubaya yangu Klout mamaki, asi ini ndoda kuona kana ndichigona kugadzirisa maitiro angu uye kuti Klout indiudze kana iri kushanda kana kwete.
Heino vhidhiyo yaKlout pane chitsva mamaki… uye kuongorora kweKlout Moments iri kuvhura munguva pfupi iri kutevera:
Iyo Klout Score parizvino inosanganisira zvinopfuura mazana mana emasaini kubva pamanomwe manomwe akasiyana uye anogadzirwa zuva nezuva kugadzirisa yako Score.
Kutaura: Kutaurwa kwezita rako mupositi kunoratidza kuyedza kwekuita newe zvakananga.
Likes: Chiito chakareruka chinoratidza kubatana nezvamunogadzira.
Comments: Sekuita kune zvemukati zvaunogovana, makomendi anoratidza zvekare kubatanidzwa nenetiweki yako.
Vanyoreri: Kuverenga kwevabati ndiyo yakanyanya kuenderera chiyero chefosi inokura nekufamba kwenguva.
Wall Posts: Zvinyorwa kumadziro ako zvinoratidza zvese simba uye kuita.
Shamwari: Shamwari kuverenga kuyera kusvika kwenetiweki yako asi haina kukosha zvakanyanya pane kuti network yako inobata sei nezvako zvemukati.
Zvinyorwa zvekare: Kudzokorora kunowedzera simba rako nekufumura zvemukati kune zvakawandisa vateveri network.
Kutaura: Vanhu vanotsvaga kutariswa nekukutaurira iwe chiratidzo chakasimba chekufurira. Isu tinofungawo nezve mutsauko mumhando dzekutaurwa, kusanganisira "kuburikidza" uye "cc".
Nyora Hunhu: Kuverengerwa pane zvinyorwa zvakarongedzwa nevamwe vashandisi zvinoratidza nzvimbo dzako dzekufurira.
Followers: Muteveri kuverenga chimwe chinhu muChikoro chako, asi isu tinonyanya kufarira kubatanidzwa pamusoro pehukuru hwevateereri.
anopindura kuti: Mhinduro dzinoratidza kuti uri kugara uchibatanidza network yako nehunhu zvemukati.
+1 's: Chiito chakareruka chinoratidza kubatana nezvamunogadzira.
Kugovana zvakare: Kugoverana kunowedzera simba rako nekufumura zvemukati kune zvakawedzerwa network paGoogle +.
Title: Yako yakashumwa zita paLinkedIn chiratidzo cheyako chaicho-chenyika pesvedzero uye inoenderera.
Connections: Yako yekubatanidza girafu inobatsira kusimbisa yako chaiyo-nyika pesvedzero.
Vanokurudzira: Vanokurudzira mune yako netiweki vanowedzera mamwe masaini kune iwo mupiro LinkedIn unoita kune yako Score.
Matipi Akaitwa: Kuwanda kwemazano awakasiya apedzwa zvinoratidza kugona kwako kufurira vamwe pamakona mana.
+ K yakagamuchirwa: Kugamuchira + K kunowedzera yako Klout Score nemari yakatarwa mukati memazuva ese e90-kuyerwa kutenderera kutendeka kweiyo Score.
Kukosha Kwepeji: Inoyerwa nekushandisa iyo PageRank algorithm inopesana neiyo Wikipedia peji girafu.
Inlinks kune Outlinks Ratio: Inofananidza iyo nhamba yeinowanikwa mukati mairi peji kune iyo nhamba yekubuda zvinongedzo.
Nhamba yeInlinks: Inoyera huwandu hwakazara hwekubatanidza zvinongedzo kune peji.
Kudos kuKlout yekuzvimisikidza pachayo… vanga vari tarisiro huru kune vezvenhau vanhu mumakore apfuura asi ini ndinoda iro timu ravo (rinozivikanwa se Kloutlaws) vachiri kuedza kugadzira nzira yakapusa yekutsvaga uye kuyera pesheni pamhepo.
Tags: klout inoyerwa seikloutklout zvibodzwachii chinonzi klout mamaki
Google: Subdomain kana Subfolder yeMultimi-Mutauro